सामाजिक बहस - विश्वप्रसिद्ध गढीमाई मेलामा हुने अत्याधिक पशुबली रोक्नुपर्छ भन्ने सामाजिक बहसमा तपाईको धारणा के छ ?
सामाजिक बहस – विश्वप्रसिद्ध गढीमाई मेलामा हुने अत्याधिक पशुबली रोक्नुपर्छ भन्ने सामाजिक बहसमा तपाईको धारणा के छ ?
March 11, 2018 March 11, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments गढीमाई, पशुबली
गढीमाई मन्दिर नेपालको बारा जिल्लामा रहेको तराईको प्रसिद्ध शक्तिपीठ हो । बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैया नगरपालिकाबाट झण्डै ८ किलोमिटर पूर्व बरियारपुरमा गढीमाईको मेला हरेक ५ वर्षमा मंसीर शुक्ल सप्तमीदेखि शुरु हुन्छ । नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट लाखौँ दर्शनार्थीहरू ओइरो लाग्ने यस पीठमा हजारौँ भारतीय दर्शनार्थीहरू पनि आउने गर्छन ।
१ महिनासम्म लाग्ने मेला विश्वप्रसिद्ध गढीमाई मेलामा हजारौ पशुहरुलाई बली दिने प्रचलन छ । यसरी हजारौं पशुको बली दिइने यो मेलामा पशुबली रोक्न पशुअधिकारकर्मीहरु तथा विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठ्ने गरेको छ । गढीमाई मन्दिरमा पशुबली दिने पुरानो प्रचलनलाई परिर्वतन गर्नेतर्फ सोंच्नुपर्ने बुद्धिजीवीहरुको भनाई छ । तर बली प्रथालाई रोक्नुपर्ने सर्वत्र चर्चा भएपनि पुरानो धार्मिक परम्परा भन्दै मन्दिर ब्यवस्थापन समितिले भने बली नरोकिने प्रष्ट पार्दै आईरहेको छ ।
विश्वप्रसिद्ध गढीमाई मेलामा हुने अत्याधिक पशुबली रोक्नुपर्छ भन्ने सामाजिक बहसमा तपाईको धारणा के छ ?
← जनमत सर्वेक्षण – कस्ता सांसदलाई मन्त्री बनाउँदा ठिक होला ?
सामाजिक बहस – राधा चौधरीमाथि कैलाली जिल्लामा ७ घण्टा निर्घात कुटपिट गर्ने दोषीहरुलाई कस्तो कारबाही गर्नुपर्ला ? →
जनमत सर्वेक्षण – नयाँ उर्जामन्त्री को हुनुपर्छ ?
February 28, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0
जनमत सर्वेक्षण – प्रदेश १ को राजधानी कहाँ हुँदा ठिक होला तपाईको विचारमा ?
February 25, 2017 साइन्स इन्फोटेक 0